Dadka qaba COVID-19 oo buux-dhaafshay isbitaalada Muqdisho | Dhacdo
Dadka qaba COVID-19 oo buux-dhaafshay isbitaalada Muqdisho
Dowladda Somaliya ayaa waxay sheegtay in dadka qaba xanuunka COVID-19 ay buuxdhaafiyeen isbitaalada Magaalada Muqdisho, taasoo muujinaysa sida xanuunka uu dalka ugu faafayo.
Wasiirka Caafimaadka Somaliya, Foosiya Abiikar Nuur ayaa sheegtay in isbitaalada loo asteeyay xanuunka COVID-19 ay aad u kordheyso tirada la seexinayo.
Iyadoo ay isa soo tarayaan dadka xanuunka laga helayo ayay dhanka kale Wasiir Foosiya sheegtay in magaalada uu gabaabsi ku yahay Oxygen-ka, xilli shirkadaha sameeya ay yar yihiin, baahida loo qabana ay aad u badan tahay.
“Magaalada Oxygen-keeda aad ayuu u yar yahay shirkadaha sameeya, baahida aad bay u badatay.” Ayay tiri Foosiya Abiikar oo Warbaahinta la hadashay.
Hadalka Wasiir Foosiya ayaa imaanaya maalin ka dib, markii Adam Abdul-mowla, Isku Duwaha Arrimaha Bani’aadanimada Qaramada Midoobey ee Xafiiska Magaalada Muqdisho (UNSOM) uu sheegay in xaaladaha COVID-19 ee dalka ay sare u kacday boqolkiiba labaatan (20%).